Nyefee maka 44 XBox 360. Etu esi enweta Xbox 360 n'efu na MSN na Buddy | Akụkọ akụrụngwa
Hoy achorom igwa gi otu esi esonye na see ihe 44 XBox 360Agbanyeghị na n’ezie, ọ bụ naanị Xbox iri abụọ dị n’aka ekpe ugbu a, a na-enyefe 28 ndị ọzọ na ụzọ anọ emetụtara. 16bọchị 15 ọ bụla ga-enwe raffle nke ga-egosipụta ndị mmeri 4 site na njikwa XBox, ndị mmeri 4 sitere na WebCams na ndị mmeri 2 sitere na Xbox Messenger Kit. Agbanyeghị na ntọala ndị akpọrọ aha Xbox consoles na ọ bụghị XBox 360 consoles m ga-eche na ọ bụ ihe dị mfe ebe ọ bụ na na asọmpi webụsaịtị enwere nkọwapụta doro anya na XBox 360 consoles.
PIsonye na raffles ị ga-aga ww.vivelive.com/encuentraabuddy ma denye aha gị. Ngwá ọrụ nke asọmpi ahụ na-elezi anya mgbe ị na-agagharị na channelụ MSN a sị na ị hụrụ a Buddy, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ ozi, ma ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla, pịa ya ọ ga-eme ka buddies counter gị. Mgbe ị hụrụ 10 buddies ị ga-enwe ike ịnweta Windows Live Emoticon Factory na ị ga-abanye kwa izu kwa raffle maka Xbox consoles, webcams na Messenger ngwa iwu.
UOzugbo ị nwere Buddies iri na nke ọ bụla ọzọ Buddy ị hụrụ, ị ga-emeri otu nsonye maka eserese ahụ maka izu abụọ ahụ. Iji maa atụ, ọ bụrụ n’ịhụta ndị enyi iri anọ na atọ, ị ga - enwe ihe ntinye iri anọ na anọ maka eserese ahụ maka izu abụọ ị nọ. N'ụzọ dị otú a, ka ndị otu enyi ị hụrụ n'oge ụbọchị iri na ise ahụ, nhọrọ ndị ọzọ ị ga - emeri kpamkpam. hapụ Xbox 360.
CDịka m kwugoro, ihe ị ga-eme iji sonye na egwuregwu ahụ bụ ịdebanye aha. Ma usoro ndebanye aha na nsonye na asọmpi ahụ bụ n'efu, yabụ ọ bụrụ na ị nwetara ahụhụ ahụ ma chọọ ịnwale ọdịmma gị, ka anyị hụ otu esi emeghe akaụntụ iji gbalịa inweta Xbox.
Nke 1) Gaa na asọmpi peeji nke bụ ww.vivelive.com/encuentraabuddy. Ozugbo ahụ ị nwere ike pịa bọtịnụ oroma «Debanye aha ugbu a!» ma ọ bụ na taabụ na elu nke windo ahụ kwuru «Ndebanye aha».
Nke 2) Windo ahụ ga-agbanwe ma ị ga-ahụ taabụ Ndebanye aha. You ga-ejupụta ALL ubi ndị nwere ezigbo data, ọ bụrụ na i tinye data ụgha ma merie raffle ha agaghị enwe ike izitere gị ihe nrite ahụ ma ọ bụrụ na enwere nsogbu ị gaghị enwe ike ikwu.
Ga-etinye aha na aha nna gị, adres gị zuru ezu na nọmba ekwentị. Mgbe ahụ ị ga-enye email (e-mail), ọ bụrụ na ịnweghị email ọ bụla ị nwere ike ịmepụta email Hotmail site na ịgụ akwụkwọ ntuziaka ndị a. «Otu esi emepụta ozi email Hotmail» Iji onye VinagreAssino.com. Ọzọ ị ga-emerịrị paswọọdụ iji nweta akaụntụ gị na asọmpi ahụ, mana T butT, ị gaghị abanye paswọọdụ nke ị ga-enweta email gị kama nke ọhụrụ ị na-eji naanị iji nweta asọmpi a. Mara ya nke ọma ebe ị ga-achọ ya ma emesịa nwee ike ịnweta akaụntụ gị na asọmpi ahụ. N'ikpeazụ, ị ga-agụrịrị ọnọdụ iwu ma ọ bụrụ na ị kwenyere, lelee igbe "Anabatara m ọnọdụ iwu". Wee pịa bọtịnụ oroma "Zipụ".
Nke 3) Ọ bụrụ na ịmechara ihe niile n'ụzọ ziri ezi, windo dị ka nke dị n'elu ga-apụta na nke a ga-agwa gị na ị debanyere aha n'ụzọ ziri ezi na ịbanye ịbanye ị ga-abanye data gị na igbe nke gosipụtara n'aka nri nke windo ahụ. Pịa bọtịnụ oroma "OK" ma gaa igbe dị n'aka nri.
Tinye email na paswọọdụ gị, mana cheta na ọ bụghị paswọọdụ email gị kama ọ bụ nke ị mepụtara iji debanye aha maka asọmpi ahụ. Wee pịa bọtịnụ "Tinye" ọbara ọbara.
Yị nwere akaụntụ gị mepụtara ugbu a, naanị ị ga-achọ ndị enyi na ọwa MSN, iji mee nke a www.edenye.es ma chọgharịa na channelụ ndị egosiri na onyogho dị n'okpuru (gosipụtara uhie).
A Mgbe ụfọdụ na ụfọdụ peeji nke ndị buddies ga-apụta na mgbe ahụ ị ga-pịa ha ịchụ nta ha. Enwere otutu ndi enyi ma ha zoro ezo ma sie ike ichota. Lee ị nwere ike ịhụ otu nke pụtara n'akụkụ aka ekpe nke ihuenyo m mgbe ị na-agụ akụkọ egwuregwu.
Cnne okuko i huru enyi, pịa ha, o gha ewe gi kedu «Chọta enyi! ebe ị ga-abanye na email gị na paswọọdụ gị. Mgbe ahụ ndị enyi gị ga-aba ụba.
AOge fọdụrụ ga-apụta na-esote ọnụ ọgụgụ nke ndị buddies ị chọtara ruo mgbe Xbox raffle ga-akwụsị. Cheta na ị chọrọ ndị enyi iri iji sonye na ihe osise ahụ yana site na iri ndị ahụ gaa karịa buddies chọtara, ohere ị nwere mmeri. Ihe osise ọzọ ga-abụ na Ọktọba 10 na 8, Nọvemba 22 na 5, Disemba 19 na 3, nke 17 niile na Jenụwarị 2007, 3. Jiri eziokwu ahụ bụ na a ka nwere ọtụtụ Xbox 360 ijide n'efu, site na ihu, "site na ihu."
SỌ bụrụ na ọ bụ nke gị, hapụ ihe ị ga-eme iji mee ememme. Ma oburu na ichoro PS3 karie Xbox, lee anya asọmpi a. Ubi Vine.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Nyefee maka 44 XBox 360. Otu esi emeri Xbox 360 n'efu na MSN na Buddy
Ihe 32 kwuru
Ọ ga-amasị m ịmata ma ọ bụrụ na ị chọta enyi bụ naanị na Spain. ma ọ bụ ọ pụkwara ịdị na Latin America. Daalụ
Ndewo Angie, eziokwu bụ na achọpụtaghị m ma ọ bụrụ na enwere mgbochi mpaghara ọ bụla iji sonye na asọmpi ahụ na ọ bụ ya mere na m ekwughị ya, mana ọ bụrụ na ị gụọ iwu nke nkwalite ahụ ị ga-ahụ na nke anọ ya kwuru na ị ga-adị onye bi na Spain isonye na zoo. Daalụ.
Achọrọ m Xbox 360 ugbu a
Enwere m olile anya imeri ma ọ dịkarịa ala, ọ dịghị mgbe m meriri bọọlụ kisiera ga naresta bes}
Enweghị m ego ọ bụla
Ọfọn, chọọ Buddies Miguel iji hụ ma ọ bụrụ na ị nwere obi ụtọ ma nweta otu Xbox 360.
O yiri nnọọ ihe siiri m ike, maka nke mbụ na-ebu enyi 5600 ...
Achọtara m nanị ise ma nye ya ego furu efu.
Ahụghị m enyi ọ bụla ebe ọ bụla ...
Enweghị m ike ịchọta enyi ọ bụla, ọ sị na-agbaso ihe ngosi n'ihi na agara m ebe ha gwara m, dịka ọmụmaatụ, egwuregwu na enweghị nke ọ bụla. Kedukwanu ka osi adi k alugnos nwere 5.000 ihe….
Ọ bụ ihe omimi nke enyi ahụ apụtaghị 😉
Achuru m mgbe niile inwe ihe xbox na-acho mgbe nile
biko mee ka nro m mezuo
Achọrọ m imeri
Achọrọ m Xbox 360
biko achoro m ima otu esi emeri ihe Xbox 360 achoro m ya
Aga m elekọta ya nke ukwuu n'ihi na ọ bụ ebumnobi kasịnụ na ndụ m, abughi m nwa bara ọgaranya, ee, esiteghị na klaasị, ọ bụrụ na m rite ya, m ga-enwe ekele maka ya.
Enwere m ezigbo mma banyere ihe osise ahụ na enwere m ọchịchọ niile ị merie
Ndewo, Ọ ga-amasị m ị nweta exbox 360
oolap achọrọ m x igbe 360 ​​site na nun nunquieren con prar uno
Chei, o nwere ike obu nro m?
nwere x box360
Achoghi m Xbox 360 maka achoghi m izuta ya ju
Enwere m olile anya na m egwu xbox 360 maka k asii ga-enwe obi uto
Achọrọ m imeri ya xk enweghị m ego iji zụta ya na xk nwanne nna m enweela nke ya ma ọ bụrụ na ọ weta FIFA 9 ọ ga-abụ onye kacha nwee obi ụtọ na mbara ala heh heh heh
Odi mma, achorom irite xbox ahu ebe m dara ogbenye na ebumnobi m bu inwe Xbox, yak, anyi di obere ego, nke oma, mama enweghi ike izutara m ya, mu na nne biri, biko, Esi m Tapachula Chiapas Mexico.
ndewo, achọrọ m imeri xbox n'ihi na m chọrọ inye ya nwa m na enweghị m ego iji zụta ya
Achọrọ m imeri Xbox biko
n'abalị gara aga, m rọrọ nrọ na m merie xbox360 na-ewepu ma kpochapụ ekele
maka kedu ihe ọzọ ị ga - achọ inye m maka na ọ na - atọ ụtọ